Ahoana ny fanondranana ny Reniranon'i Saladao mety hamonjy ny Buenos Aires - Ellicott Dredges
Ahoana ny fiatraikan'ny renirano Salado amin'ny Buenos Aires? Ny tantara faramparany dia nanaporofo fa ny oram-be be dia be amin'ny faritra ambany dia nahatonga ny reniranon'i Salado hanondraka foana ny vondron'olona mpamboly. Mandra-pahatonga vao tsy notazonina tsara ny renirano. Io no nahatonga ny tondra-drano nialoha. Ny famatsiam-bola vao haingana izao dia mamela ny hanatsarana ny fanatsarana ny renirano sy ny faritra manodidina ary miditra amin'ny mety Fitaovana fanoratana izay hanampy amin'ny fanaraha-maso ny mety hisian'ny tondra-drano amin'ny alàlan'ny famerenany ny renirano amin'ny toetrany voajanahary.
Ny Reniranon'i Salado sy ny fiantraikany
Tamin'ny taona 2000 ka hatramin'ny 2017 dia tany 800,000 hektara mahery no simba nanerana an'i Buenos Aires, Arzantina, vokatry ny tondra-dranon'ny reniranon'i Salado. Ny tanànan'i Buenos Aires dia renivohitr'i Arzantina ary tanàna lehibe indrindra ao amin'ny firenena. Ny vondrom-piarahamonina mandroso dia any amin'ny faritanin'i Buenos Aires, akaikin'ny vavahady Rio de la Plata. Ny mety tsy fantatry ny any ivelany dia ny faritanin'i Buenos Aires dia vondrom-piompiana lehibe. Manodidina ny 20% ny voam-bary sy hena any Arzantina no avy any amin'ny faritra ary heverina ho zava-dehibe amin'ny toekarem-pirenena. Ny ankamaroan'ny tany ao amin'ny faritany dia manan-karena be amin'ny otrikaina, nefa koa fisaka sy mora tohina amin'ny toetr'andro tafahoatra ka nahatonga ny haintany sy tondra-drano.
Ny Ellicott Series 1270 Dragon® Dredge
Betsaka ny renirano, estuaries ary renirano kely kokoa manodidina an'i Buenos Aires. Nandritra izay 40 taona lasa izay dia nitombo 20% ny rotsak'orana tao Buenos Aires. Ny orana fanampiny dia nahatonga ny safo-drano ho an'ny ony Salado. Ireo toerana izay manamorona renirano toa ny reniranon'i Salado dia mora tondra-drano mandritra ny vanim-potoana orana. Nandritra ny taona maro, ny reniranon'i Salado dia nanangona fitaovana isan-karazany vokatry ny oram-be, nanangona sedimentation sy silt be dia be. Rehefa tsy voakarakara tsara ny renirano iray dia hiangona ny potipoti-javatra rehefa mandeha ny fotoana, ka mahatonga ny ony ho vaky. Io fepetra io dia mametra ny fahafahan'ny renirano manome rano mikoriana voajanahary ary mampiakatra ny haavon'ny rano ka niteraka tondra-drano.
Nandritra ny taona maro dia nifanakalo hevitra momba ireo hevitra sy vahaolana maro samihafa toy ny fanitarana ny renirano ary ny fantsakana lalindalina kokoa amin'ny fanantenana ny hampihena ny tondra-drano ny mpitarika ny vondrom-piarahamonina sy ny mpanao politika, ary tsy nahavita nanangona ny vola ilaina handrakofana ny vidin'ny goavambe toy izany. Tetikasa famoronana ony ka hatramin'ny vao haingana.
Doka roa 1270 Dragon® Dredges miasa ao amin'ny Reniranon'i Salado
Tamin'ny volana aprily 2017, ny Banky Iraisam-pirenena dia nanaiky ny $ 300 tapitrisa fampindramam-bola fna ny tetikasa fisorohana ny tondra-drano. Nandritra izay 18 volana lasa izay, maro ireo mpikirakira dredging no nandany fotoana be niasana mba hanatsarana ny toetran'ny tondra-drano ao amin'ilay faritra. Hatreto dia efa nesorin'ny mpandraharaha ny fasika sy rano mitentina 5.23 tapitrisa yd³ (4 tapitrisa m³) tao amin'ny reniranon'i Salado tamin'ny alàlan'ny dredges.
Manampy amin'ny fifehezana ny tondra-drano any amin'ny faritra eo an-toerana, ny mpiasa amin'ny fandatsahan-drano Helport sy Chediack (UTE) dia nisafidy ny hampiasana dredges mpanapahana roa an'i Cutry ElNotX Dragon® Cutter suction izay tsara ho an'ity karazana renirano renirano fampiharana. Ny dredge 1270 Dragon® dia mahatratra ny halalin'ny rano mandriaka hatramin'ny 50 '(15 m). Misy koa ny paompy 18 "misy ny piraika antonony misy azy ary misy milina diesel roa misaraka, izay natokana ho an'ny paompy dredge ho an'ny famokarana mahomby.
Inona no hitranga aorian'izay?
Angamba ny fanamby lehibe indrindra atrehan'ireo mpiasa miasa amin'ny tetikasa dia ny fidirana voafetra amin'ny lalana maloto rehefa avy ny orana satria ny lalana dia manjary sarotra mankany amin'ny faritra misy ny fanondranana. Ny fidirana amin'ireo renirano amin'ny manodidina dia voaporofo fa sarotra ihany ny hiditra ary tena voafetra. Saingy, na eo aza ireo sakantsakana ara-batana ireo, ny lalànan'ny Ellicott Dragon® dia mora mora foana sy manavao ny alàlan'ny andian-tsambo ho any amin'ny toerana sarotra azo any amoron'ny renirano. Amin'ny toe-javatra toa itony dia zava-dehibe tokoa ny hananana dredge azo itokisana izay mahavita miatrika ireo fanamby sarotra ireo.
Na dia tsy manome antoka aza ny renirano Salado dia tsy hisy ny tondra-drano amin'ny ho avy, io dia iray amin'ireo fomba mahomby indrindra hanamaivana na hampihenana ny tondradrano amin'ny ho avy. Raha vao miverina amin'ny toe-javatra voajanahary kokoa ny renirano amin'ny alàlan'ny fanesorana ny maloto tafahoatra, dia hikoriana amin'ny lalan'ny voajanahary ny rano ankehitriny. Ho fanampin'izany, angonina ny fasika avy amin'ny ezaky ny fanondranana ny renirano dia averina averina ary ampiasaina hanatsarana ny lemaka, fanatsarana ny haavon'ny terrain, koa manampy amin'ny fampihenana ny voka-dratsin'ny tondra-drano indray any amin'ireo vondron'olona ambany.